Monado, oo ah goob furan oo loogu talagalay aaladaha xaqiiqda dalwaddii | Laga soo bilaabo Linux
Xulka wararka oo dhan | | Ciyaaraha, Noticias
Dhawaan daabacaadda bilaabitaankii ugu horreeyay ee mashruuca "Monado" ayaa lagu dhawaaqay, taas oo ah barxad cusub oo loogu talagalay abuurista hirgelin furan oo ah heerka OpenXR, kaas oo qeexaya API guud si loo abuuro codsiyo dhab ah oo la taaban karo, iyo sidoo kale dhowr lakab si ay ula falgalaan kombuyuutarrada sifooyinka astaamaha qalabka gaarka ah.
Jaangooyada waxaa diyaarisay daladda Khronos, taas oo sidoo kale horumarinaysa heerarka sida OpenGL, OpenCL iyo Vulkan.
1 Ku saabsan Monado
1.1 Ku saabsan nooca koowaad ee Monado
Ku saabsan Monado
Cute waxay bixisaa waqti-socod oo si buuxda u fuliya shuruudaha OpenXR, kaas oo loo adeegsan karo in lagu abaabulo shaqada iyadoo la adeegsanayo xaqiiqda dhabta ah ee la taaban karo ee taleefannada casriga ah, kiniiniyada, PC iyo aaladda kale, tan iyo mashruucu wuxuu horumariyaa dhowr nidaamyo aasaasi ah, kuwaas oo ah kuwa soo socda:
Mashiinka muuqaalka hawada: kaas oo ka masuulka ah lasocodka shayga, qeexida dusha, dib u dhiska mesh, garashada tilmaanta, raadinta indhaha.
Mashiinka raadinta dabeecadda: Shaqadeedu waa xakamaynta xasilloonida gyroscopic, saadaasha dhaqdhaqaaqa, ilaaliyayaasha, raadraaca dhaqdhaqaaqa indhaha iyadoo loo marayo kamaradda, raadinta booska oo ku saleysan xogta laga helay koofiyadda VR.
Server isku dhafan: wuxuu qabtaa habka wax soo saarka tooska ah, gudbinta fiidiyowga, hagaajinta muraayadaha, halabuurka, qaabeynta goobta shaqada si loogu shaqeeyo barnaamijyo badan isku mar.
Mashiinka isdhexgalka- Tani waxay mas'uul ka tahay jilitaanka geeddi-socodka jirka, noocyo qalab iyo qalab loogu talagalay codsiyada dhabta ah ee muuqaalka ah.
Qalab: ayaa mas'uul ka ah kala-soocidda qalabka, dejinta xadka dhaqdhaqaaqa, iyo waxyaabo kale.
Sidee tahayl Monado waa waqtiga ugu horeeya ee OpenXR ee GNU / Linux waxayna rajeyneysaa in la wado horumarka il furan nidaamka deegaanka ee 'XR' iyo in la siiyo dhismooyinka aasaasiga u ah iibiyeyaasha qalabka si ay u bartilmaameedsadaan barnaamijka 'GNU / Linux'.
Astaamaha ugu waaweyn taagan, waa helitaanka darawallada loogu talagalay dhageysiga xaqiiqda dhabta ah ee HDK (Qalabka OSVR Hacker Developer Kit) iyo PlayStation VR HMD, iyo sidoo kale kantaroolayaasha Dhaqaaqa PlayStation iyo Soodha Hydra.
Waxaa intaa dheer bixinta suurtagalnimada adeegsiga qalab u dhigma mashruuca OpenHMD oo waxaad u siisaa darawal muraayadaha dhabta ah ee North Star oo la kordhiyay.
Sidoo kale wuxuu leeyahay qawaaniin udev ah oo lagu rakibo gelitaanka qalabka VR iyadoon rukhsad rujin lahayn, oo uu weheliyo darawal loogu talagalay nidaamka raadinta booska Intel RealSense T265.
Iyo sidoo kale adeege isku dhafan oo diyaar u ah in la isticmaalo oo taageera wax soo saarka tooska ah ee qalabka, iyadoo la dhaafayo nidaamka server-ka X. Hooska waxaa la siiyaa Vive iyo Panotools iyo taageerada lakabyada saadaasha.
Waxyaabaha kale ee lagu garto waa:
Qaybaha raadraaca dhaqdhaqaaqa ee leh qaab loogu talagalay shaandhaynta iyo qulqulka fiidiyaha.
Nidaamka la socoshada astaamaha leh lix darajo oo xorriyad ah (6DoF, horay / gadaal, kor / hoos, bidix / midig, yaw, garoonka, duudduuban) loogu talagalay PSVR iyo PS Move controllers.
Module loogu talagalay isdhexgalka Vulkan iyo OpenGL sawirada API-yada.
Habka aan shaashadda lahayn (madax la’aan).
Maamul isdhexgalka meelaha iyo aragtida.
Taageero aasaasi ah oo loogu talagalay iswaafajinta qaabka iyo ku biirinta macluumaadka (ficillada).
Ku saabsan nooca koowaad ee Monado
Hadda nooca ugu horeeya waxaa loo arkaa tijaabo waxaana loogu talagalay in lagu bilaabo horumariyeyaasha aqoonta u leh barxadda.
Xaaladda jirta ee mashruuca, Monado kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan codsiyada iyo raad wareegga on qalabka socon adoo adeegsanaya OpenHMD iyo waliba waxay bixisaa awood si toos ah loo soo bandhigo wax soo saarka aaladaha xaqiiqda dalwaddii iyadoo la dhaafayo iskudhafka naqshadeynta nidaamka qalliinka.
Xeerka mashruuca wuxuu ku qoran yahay C waxaana lagu qaybiyaa hoosta GPL-u hoggaansanaanta Boost 1.0 Shatiga Barnaamijka, kaas oo ku saleysan shatiyada BSD iyo MIT, laakiin uma baahna in la xuso goorta shaqooyinka soosaarka ah loo qaybiyo qaab binary ah.
Hadda madal kaliya taageertaa Linux lana jaanqaadida nidaamyada kale ee hawlgalka ayaa la filayaa mustaqbalka.
Ugu dambeyntii, Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato Monado, Waxaad ka hubin kartaa faahfaahinta, iyo sidoo kale inaad awood u leedahay inaad gasho lambarka isha ee tan, websaydhkeeda rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Monado, oo ah meel laga helo ilo furan oo loogu talagalay aaladaha runta ah
Waxaan rabaa vr ka fiican linux waxay la jiraan cv1 oo waalka aan dhameystirneyn ayaa ka tagaya cudud iyo lug. Htc wuxuu u muuqdaa inuusan lahayn ujeedooyin badan sidaa darteed waxaan ku weydiiyay twitter. Waa inay lahaadaan codsiyo horumariyayaal inay marka hore ka fikiraan.
Tan kale ayaa ah in yar ay yihiin kuwa weydiisanaya horumarka linux kuwa u adeegsada vr deegaanno aad uxiran iyo tan kale oo ah in yar oo adeegsadayaal ah oo raba inay helaan aalado xiran oo aan horey u ogaanay marada taas!
Manjaro Linux 19.0 “Kyria” waxay la timid Linux 5.4, Xfce 4.14, KDE 5.17, Gnome 3.34 iyo in ka badan